ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီကြီး CATL သည် အစုရှယ်ယာ များကို အစုရှယ်ယာ တစ်ခု လျှင်ဒေါ်လာ ၆၁ ဖြင့် ရောင်းချ သည် - Pandaily
ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီကြီး CATL သည် အစုရှယ်ယာ များကို အစုရှယ်ယာ တစ်ခု လျှင်ဒေါ်လာ ၆၁ ဖြင့် ရောင်းချ သည်
Jun 23, 2022, 12:44ညနေ 2022/06/23 14:16:33 Pandaily
တရုတ် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီကြီးခေတ်ပြိုင် အမ် ပီ ယာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (CATL)ကုမ္ပဏီက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် အစုရှယ်ယာ ၁၀၉. ၇ သန်းကို ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ယွမ် ၄ ၁၀ (ဒေါ်လာ ၆၁. ၁၂) ဖြင့် ရောင်းချ ခဲ့ပြီး ယွမ် ၄၅ ဘီလီယံ မြှင့် တင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် August ဂုတ် လတွင် CATL သည်ယွမ် ၅၈. ၂ ဘီလီယံ မြှင့် ရန် ရှယ်ယာ များ ရောင်းချ ရန် အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို နှစ် ၏ရှယ်ယာ များတွင် စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး စျေးကွက် ၏ စိတ် ၀ င် စားမှု ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နို ၀ င်ဘာလတွင် CATL သည် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ မှုကို ယွမ် ၄၅ ဘီလီယံအထိ လျှော့ချခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ကြေငြာ ချက်အရ စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ ၄၂ ဦး ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး အမြင့်ဆုံး လေလံ မှာ Oriental Guardian Asset Management Co., Ltd. ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံး လေလံ မှာ Nord Asset Management Co., Ltd. ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ ၂၂ ဦး ကို CATL ၏ရှယ်ယာ များ ပေးခဲ့သည်။ အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူမှာ Guotai Junan Securities ဖြစ်ပြီး ယွမ် ၄. ၆ ၆၄ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ ရှယ်ယာ ၁၁. ၃ ၇၅ သန်း ရရှိခဲ့သည်။
CATL ကုမၸဏီက ရရွိ လာတဲ့ ေငြေၾကး ေတြကို တ႐ုတ္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၄ ၿမိဳ႕မွာ လီ သီ ယမ္ အ ုိင္း ယြန္း ဘက္ထရီ ထုတ္လုပ္မႈ ထုတ္လုပ္ ေရးနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရး အျပင္ သုေတသန နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳ သြားဖို႔ စီစဥ္ထား
Gaogong Lithium Industry မှ အချက်အလက်များအရ ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင် နှင့်စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ များ တင်ပို့ ရောင်းချ မှုသည် ၁၅ ၁၆ GWh ခန့် ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ CATL ၏လက်ရှိ စျေးကွက် ဝေစု ၃၀% ကို အခြေခံ၍ ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ တင်ပို့ ရောင်းချ မှုသည် ၄ ၅၅ GWh ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:CATL သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး 5G လုပ်ငန်း ကွန်ယက် ကိုတည်ဆောက် သည်
ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန် တွင်စုစုပေါင်း ငွေကြေး ရန်ပုံငွေ မှာယွမ် ၈၉. ၀ ၇၂ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး အသားတင် လည်ပတ် ငွေ မှာယွမ် ၄၂. ၉ ၀၈ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ CATL သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှုများ မှတစ်ဆင့် ၎င်း၏ ပြိုင်ဆိုင် မှု အနေအထားကို ခုခံကာကွယ် နေသည်။CATL အကြီးအကဲ သိပ္ပံပညာရှင် Wu KaiKirin Battery လို့ လူတိုင်း ခေါ် ကြတဲ့ သူ့ရဲ့ CTP 3.0 Battery ကို မကြာခင် ဖြန့်ချိ တော့မယ်လို့ မကြာသေးခင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ CTP နည်းပညာသည် ဘက်ထရီ ၏စွမ်းအင် သိပ်သည်းဆ ကိုတိုးမြှင့် နိုင်သည်၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် ကိုရိုးရှင်း စေပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ စေသည်။
AIMS သည် Sequoia China နှင့် CATL Round B ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာသန်း ရာနှင့်ချီ ရရှိ ခဲ့သည်
အသိဉာဏ်ရှိသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နှင့်စက်မှု အသိဉာဏ်ရှိသော လုပ်ငန်း AIMS သည် မကြာသေးမီက ယွမ်သန်း ရာနှင့်ချီ သော ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု B ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။